Barnaamijyada Cuntada iyo Lacagta Cadaanka ah ee Dadka aan Muwaadiniinta ahayn | LawHelp Minnesota
Barnaamijyada Cuntada iyo Lacagta Cadaanka ah ee Dadka aan Muwaadiniinta ahayn
Barnaamijyada Cuntada iyo Lacagta Cadaanka ah ee Dadka aan Muwaadiniinta ahayn (PDF)447.71 KB
Waxa jira barnaamijyo manfacyo dowladeed ah oo ka caawin kara dadka reer Minnesota cunto iyo lacag caddaan ah. Inaad heli kartid manfacyadaas iyo in kale adiga oo an muwaadin ahayn waxay ku xiran tahay martabadaada sharci iyo taariikhdii aad Maraykanka (U.S.) soo gashay.
Barnaamijyadda Gargaarka Cuntada
SNAP – Barnamijka Gargaarka Kaabida Nafaqada (Cuntada Siin)
SNAP, oo horey loogu yeeri jiray Cunto Siin, waa barnaamij caawiya dadka danyarta ah iyo qoysasku inay cunto helaan.
Ma heli karaa SNAP?
Si aad u hesho manfacyada SNAP, waa inaad tahay qof danyar ah. Hadii aadan muwaadin ahayn, badanaa waa inaad ahaataa “xaq u yeeshe” aan muwaadin ahayn.
Waxaad tahay “xaq u yeeshe” aan muwaadin ahayn hadii:
Aad haysato sharci deganaansho ah (green card). (Macnaha inaad sharci degaansho joogta ah leedahay ama haysto martabada LPR).
Aad qaxooti tahay. (Tan waxa ku jira hadii aad tahay “Ameeraasiyan” uuna aabahaa ahaa muwaadin Mareykan ah (U.S.) oo ku noolaa Koonfurta Bari ee Qaarada Aasiya xilligii sanaddihii Dagaalkii Fiitnaam, hadii aad ka soo jeedo Cuba ama Haiti, ama hadii aad tahay Afgaani ama Muhaajir Martabad Gaar ah leh oo Ciraaqi ah).
Lagu siiyey magangelyo.
Lagu fasaxay Mareykanka Maraykanka (U.S.) ugu yaraan sannad, iyo faxasaagii oo wali waqtgiisii dhicin.
Aad leedahay ka reebid ama baajin ah in wadanka lagaa saaro.
Aad haysato Fiisaha T (T-visa) ee la siiyo dhibanaayasha la tahriibiyo.
Aad haysato martabada muhaajirka lagu tacadiyo.
Ogow: Khasab ma aha inaad tahay “xaq u yeeshe” aan muwaadin ahayn hadii aad tahay ilmo ka yar 18-sanno jir. Waxa lagaa rabaa uun inaad si sharci ah aad ku degen tahay Maraykanka (U.S.).
Ma inaan sugaa si aan u helo manfacyada SNAP?
Xataa hadii aad tahay “xaq u yeeshe” aan muwaadin ahayn, waxa laga yaabaa inaad sugto 5- sanno (laga soo bilaabo taariikhdii aad noqotay “xaq u yeeshaha”) si aad u hesho manfaca (SNAP). Khasab Ma’aha inaad sugto 5-sanno hadii aad tahay.
qof la siiyey magangalyo
qof haysta ka reebida wadan ka saarida.
Halgamaa Mareykan ah (U.S.) ama ka tirsan ciidamada qalabka sida ee Maraykanka (U.S.)
xilo ama ilmo yar oo u dhalay halgamaa ama qof ka tirsan hadda ciidamada qalabka sida ee Maraykanka (U.S.)
qof ku joogay si sharci ah wadanka Ogoosto 22, 1996 AYNA naafanimo u aqoonsatay hay’ada sooshal sakuuratiga (social security) ama gobolku.
ka yar 18
qof ku joogay si sharci ah wadanka Ogoosto 22, 1996 AHAANA 65 jir ama ka weynaa maalintaa
Ah dadka Hmoongaha ama Buuralayda Lao (Highland Lao)
Waxaan Maraykan (U.S.) ku imi kafiil. Arrinnkaas ma dhib bay ku tahay helida manfaca SNAP?
Dadka Maraykan (U.S.) yimaada badankoodu waxa ay ku leeyihiin qof qaraabo ah Maraykanka (U.S.) oo kafiil qaada. Qofka qaraabada ah ee kafiilka ahi waa qof qoyska ka mid ah oo ah muwaadin ama haysta sharci deganaan rasmi ah (LPR). Kafiilku waxa uu ogolaadaa inuu mas’uul kaa noqdo adiga kolka aad Mareykanka (U.S.) timaado. Kafiilku wuxuu ka balan qaadaa hay’ada (USCIS) in hadii aad sabool noqoto, uu ku caawin doonaan adiga.
Hadii aad timid Maraykanka (U.S.) ka dib Deceember 19, 1997 adiga oo qof qaraabo kuu ahi uu wakiil kaa yahay, dowladu waxay ay u xisaabin kartaa dakhliga iyo hantida qofka kafiilka kaa ah iyo xilihiisa sidii dakhli iyo hanti aad adigu leedahay oo kale. Hadii hal qof ka badan uu kafiil kaa ahaa dadkaa dakhligooda waxaa loo xisaabin sidii dakhligaaga oo kale. Dakhliga kafiilka waa la xisaabin ilaa iyo inta aad ka noqonayso muwaadin Mareykan (U.S.) ah, qofka kafiilka kaa ahi uu ka geeriyoodo ama uu si rasmi ah uga tago wadanka Mareykanka (U.S.) ama aad shaqeysay muddo 10 sanno ah lagana jarayey canshuurta (FICA) lacagtaada.
Kolka la xisaabiyo dakhliga iyo hantida kafiilkaaga waxaa dhici karta inay kor kaa mariso xadka dakhliga xaqqa loogu yeesho barnaamijka SNAP. Waxaa jira 2 waxyaabood oo laga reebo xisaabta dakhliga kafiilka:
Saboolnimada: Dakhliga kafiilka lama xisaabiyo 12 bilood hadii aad keeni kartidcadeyn ah in aad cunto la’aan IYO hoy la’aan aad noqonayso hadii la xisaabiyo dakhliga.
Tacadi: Dakhliga kafiilkaaga lama xisaabiyo hadii aad keeni kartid cadeyn ah in adiga ama ilmahaagu aad la kulanteed tacadi ama cadownimo aad u daran oo idinka timid xilahaaga ama waalid. Aadana la noolaan karin tacadi gaystaha mar dambe. Waa khasab inaad cadeyso inaad ugu baahan tahay gargaarka SNAP tacadiga awgii.
Ogow: Dakhliga kafiilka ILMAHA KUMA DARO XISAABTA barnaamijka SNAP.
Ogow: SNAP ka, degmadu waxay eegtaa baaxada qoyska kafiilka iyo daynta joogtada ah ee lagu lee yahay, marka ay go’aaminayso inta dakhliga kafiilka ah ee la xisaabinayo.
MFAP – Barnaamijka Gargaarka Cuntada ee Minnesota
MFAP waxay ka caawisaa waayeelka aan muwaadiniinta ahayn ee jooga Minnesota gadashada cuntada. Waxayna u hogaansantaa xeerarka SNAP. Waa khasab inaad jirto ugu yaraan 50-sanno.
Ma heli karaa MFAP?
Hadii aadan ahayn “xaq u yeeshe” aan muwaadin ahayn, ama aad sugaysay 5 sano helida manfacyada SNAP, waxa dhici karta inaad xaq u yeelato inaad hesho MFAP. Waa inaad si sharci ah ugu nooshahay Mareykanka (U.S.)
Ogow: Hadii aad haysato Fiisaha (U-Visa) ama martabada Dib U Dhigida falka ee Imaanshaha Ilmanimada (DACA), xaq ayaad u leedahay MFAP hadii aad 50- sanno jir tahay ama aad ka wayn tahay.
Waa inaad ka soo baxdaa shuruudaha dakhliga iyo hantida ee SNAP si aad u hesho MFAP ka. Taas macnaheedu waa hadii aadan xaq u lahayn SNAP dakhliga kafiilka oo la xisaabiyey awgii, ma heli karaysid MFAP, iyana. Isla labadii waxyaabood ee reebay ee ku saabsanaa saboolnimada i iyo tacadiga ayaa quseeya MFAP kana.
Hadii aad codsato MFAP, waa inaad qaadaa “talaabooyin” aad ku raadsamayso muwaadinimo. Kuwaan waxa loo xisaabiyaa qaadista “talaabooyin”:
Qaadasho cashar muwaadinimo, akhris-qoris, Ingiriis sidii af labaad (ESL). Waa la xisaabin hadii aad ku jirto liiska sugista fasallada ESL ama fasalada far barashada.
Aad leedahay codsi-dalab muwaadinimo oo ka diiwaangashan hay’ada USCIS iyo inaad sugayso imtixaan ama waqtiga dhaarinta. Ama aad codsatay in lagaa daayo imtixaanka shuruudihiisa.
Aad ku dhacday imtixaanka muwaadinimada 2 mar ama aadan fahmi Karin xuquuqda iyo mas’uuliyada muwaadinimada Maraykanka (U.S) ah.
Khasab ma aha inaad qaado wax talaabooyin ah hadii aad tahay:
aad si sharci ah ugu noolayd Mareykanka (U.S.) muddo ka yar 4-sanno,
aad tahay 70 jir ama aad ka wayn, ama
Aad ku nooshahay xarun kalkaaliso, guri kooxeed, ama meel kale oo la mid ah.
Barnaamijyada Gargaarka ee Lacagta Cadaanka ah
Ma u heli karaa manfacyada lacagta cadaanka ah qoykayga?
Ogow: SSI laguma soo darin halkan. Eeg warqadayada xogta aruursan ee SSI ga Dadka Aan Muwaadiniinta Ahayn
Lacagta Cadaanka ah ee Qoyska:
MFIP (Barnaamijka Maalgelinta Qoyska ee Minnesota)
DWP (Barnaamijka Shaqo u Weecinta)
FSS (Adeegyada Xasilinta Qoyska)
Waa aad heli kartaa manfacyada MFIP, DWP, ama FSS hadii aad tahay “xaq u yeeshee” aan muwaadin ahayn. Sidoo kale waad heli kartaa mid kasta oo manfacyadaas ah hadii aad si sharci ah ugu nooshahay Maraykanka (U.S.). Tusaale ahaan, waa heli kartaa manfacyadaa hadii:
Aad tahay Degane ku meel gaar ah oo Sharciyeysan?
Aad haysato martabada Ilaalinta ku Meel gaarka ah (TPS)
Aad codsatay magangalyo aadna haysato warqad shaqo
Aad tahay xilo ama ilmo muwaadin Maraykan (U.S.) ah aadna haysato fiiso la ansaxiyey iyo codsi wali hawshiisii socoto oo aad ku heli martabada deganaanshada rasmiga (LPR),
Laguu ogolaaday sii deyn ku salaysan bini’aadanimo,
Dib lagaa Dhigay Bixid Khasab ah (DED) ama martabada dhib uga dhigada fal, ama ka deyn masaafurin ama
Aad haysato martabada DACA
Iminka, Ma aad heli kartid manfacyada lacagta cadaanka ah ee qoyska, hadii martabadaadu ay ku salaysan tahay:
Fiisaha U (U-Visa)
Hadii aad joogtay in ka yar sannad Maraykanka (U.S.), waxaa durbadiiba aad gali barnaamijka FSS intii aad geli lahayd barnaamijyada MFIP ama DWP.
Ma inaan sugaa helida manfacyada?
Ma jiraan wax ah muddo sugitaan ee barnaamjiyada MFIP, DWP, ama FSS.
Waxa aan imid wadanka Mareykanka (U.S.) iyadoo kafiil la iga yahay. Arrintani ma quseeysaa helida barnaamijyada MFIP, DWP ama FSS ka?
Hadii aad ku timid Maraykanka (U.S.) dacwo uu qof aad qaraabo tihiini uu kuu dacawooday, dowladu waxay u xisaabin kartaa dakhliga iyo hantida kafiilkaaga iyo kuwa xilaha kafiilkaaga sidii dakhli ama hanti aad adigu leedahay oo kale. Hadii hal qof ka badan kafiil kaa yahay, dakligaas sidoo kale waxa loo xisaabinayaa sida dakhligaaga oo kale. Dakhliga kafiilka waa la xisaabin ilaa iyo inta aad ka noqonayso muwaadin Mareykan (U.S.) ah, qofka kafiilka kaa ahi uu ka geeriyoodo ama uu si rasmi ah uga tago wadanka Mareykanka (U.S.) ama aad shaqeysay muddo 10 sanno ah lagana jarayey canshuurta (FICA) lacagtaada.
Kolka la xisaabiyo dakhliga iyo hantida kafiilkaaga waxaa dhici karta inay kor kaa mariyaan xadka dakhliga xaqqa loogu yeesho barnaamijka lacagta cadaanka ah. Waxaa jira 2 waxyaabood oo laga reebo xisaabta dakhliga kafiilka Waxa jira labo laga reebo si loo xisaabiyo daqliga kafiilka. Waxayna la mid yihiin ka reebitaanada kor ku xusan ee hoos yimaada qaybta, “waxaan ku imid Mareykanka (U.S.) kafiil. Arrintaasi ma quseeysaa helida SNAP?”
Waxa jira xeer 3-sanno ah oo gaar ah oo quseeya dadka ku jooga Mareykanka (U.S.) fiisaha kala duwanaanta dadka. Waad heli manfacyada hadii aad ku guulaysatay fiisaha baqtiyaanasiibka ah. Hadii aad haysato fiisaha kala duwanaanta dadka, waxaa dhici karta in qaar ka mid ah dakhliga kafiilkaaga loo xisaabiyo sidii dakhli aad adigu leedahaya oo kale. Laakiin in yar oo ka mida ayaa la xisaabin hadii aad ku timid Mareykanka (U.S) dacwo qaraabo kuu xaraysay. Kolka la xisaabiyo dakhliga iyo hantida kafiilkaaga waxaa dhici karta inay kor kaa mariyaan xadka dakhliga xaqqa loogu yeesho barnaamijyada MFIP, DWP iyo FSS.
Hadii aadan ahayn “xaq u yeeshe” aan muwaadin ahayn, laakiin aad si sharci ah ugu nooshahay Mareykanka (U.S), isla “talaabooyinkii” aad u qaaday helida MFAP (kor) ayaa ku quseeyn adiga sida aad u hesho manfacyada MFIP iyo DWP.
Si aad u hesho manfacyada FSS, waa khasab inaad qaado “talaabooyin” ah dhanka helida muwaaadinimada, xataa hadii aad tahay “xaq u yeeshe” aan muwaadin ahayn.
Ma waxaa jira shaqo la iska doonayo?
Hadii aad qaadato manfacyada lacagta cadaanka ah ee qoyska, waa inaad shaqo raadisaa ama shaqo heshaa. Waxaa iyana dhici karta inaad awoodo in lagu xisaabiyo fasalada ESL ka ah waqtiga loo qorsheeyey shaqo raadinta iyo qorshaha shaqada.
Aan ahayn lacagta Cadaanka ah ee Qoyska:	GA (Kaalmada Guud) MSA(Gargaarka Kabida ah Minnesota)
Kaalmada Guud - GA
Isla xadidaadihii laanta socdaalka ee barnaamijka MFAP ayaa quseeya iyana barnaamijka GA:
Waxa dhici karta in aad hesho GA hadii aad tahay qof “si sharci ah ugu nool” Mareykanka (U.S.), xataa hadii aadan ahayn “xaq u yeeshe” aan muwaadin ahayn.
Waa inaad qaado “talaabooyin” ku saabsan noqoshada muwaadin
Waxa dhici karta xisaabinta dakliga kafiilkaaga inay kaa dhigto qof aan xaq u lahayn, aan ka hayn inaad ka soo bixi karto mid ka mid ah 2 da waxyaabood ee laga reebay.
Ogow: hadii aad haysato martabada DACA xaq waxaa u leedahay GA. Hadii aad haysato Fiisaha-U (U-Visa) waxaa dhici karta inaad xaq u yeelato GA.
Taakuleynta Kabida ah ee Minnesota - MSA
MSA waxa loogu talo galay dadka hela SSI ama manfacyada naafada la siiyo ee Sooshal Sakuuratiga (Social Security). Xeerarka laanta socdaalka ee quseeya barnaamijka MSA waa kuwo la mid ah kuwa barnaamijka (SSI). Eeg warqada xogta aruursan ee SSI ga Dadka Aan Muwaadiniinta Ahayn.